Mpanamboatra fitehirizana ranomandry mandeha ho azy - Mpamatsy sy ozinina fitehirizana ranomandry China
Screw Type fitehirizana ranomandry mandeha ho azy
Fitehirizana ranomandry azo antoka, natao ho an'ny fitehirizana ranomandry kely.
Ny firafitra fanosotra ranomandry karazana tsy manam-paharoa dia hanatitra ranomandry tsy an-kijanona, tsy tompon'andraikitra amin'ny fitohanan'ny ranomandry.
Fitehirizana ranomandry mahazatra
Ireo takelaka fitehirizana mangatsiaka amin'ny fananganana efitrano fitahirizana mangatsiaka dia misy amin'ny halavan'ny namboarina manokana, ny sakany, ny haavony ary ny akony amboniny, mba hihaona amin'ireo mpampiasa.fitakiana fampiharana isan-karazany. Mampanantena izahay fa ny efitrano mangatsiaka farany dia manana kalitao avo sy azo itokisana.
V karazana fitehirizana ranomandry
Ny fitoeram-pitehirizana ranomandry dia noforonina manokana miaraka amina sosona roa sosona. Misy sosona mihodina amin'ny rivotra manodidina ny ranomandry. Na dia feno gilasy aza ny fitoeram-pitehirizana ranomandry dia misy fitaovana fampangatsiahana fitaovana hitazomana ny hafanan'ny fitehirizana ranomandry amin'ny- 5℃- - 8℃, hitandrina ny ranomandry ho maina sy ho maina.
Fitehirizana ranomandry kely habe
Ny fitehirizana ranomandry dia vita amin'ny takelaka anatiny sy takelaka famehezana ivelany, vy tsy misy fangarony, fitakiana fahadiovana.